Original umhlangano LCD screen touch-screen for BlackBerry 9380 Ijika — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Original umhlangano LCD screen touch-screen for BlackBerry 9380 Ijika
Lula ukukhishwa wokulungisa. Quality BlackBerry — lwangempela spare okuyingxenye.
LCD Original wesibuko BlackBerry 9380 Ijika ababehlangene ngokugcwele:
Thinta-screen (isikrini) ebandleni ne front panel BlackBerry 9380 Ijika ngesipika isethi
Izintambo zifakwa futhi izixhumi
umhlangano screen okunjalo nge touch screen efakwe ekucaleni, lapho ukuhlangana ifoni. Screen futhi zokuthinta isikrini — izakhi ezibalulekile BlackBerry smartphone, futhi, ngeshwa, asikwazi lilungiswe uma kwenzeka iphutha. Uma BlackBerry 9380 wakho screen eliphukile noma touch screen, bagcwala ketshezi, abanesimo izinkinga touchpad uzwela noma yimuphi omunye izinkinga namalungu izingxenye izakhi, elilungile kakhulu ikhambi — umhlangano replacement screen. Funda okwengeziwe ikhasi Screen Ukubuyiselwa ne umhlangano touch screen.
Isaziso umhlangano screen for BlackBerry 9380 Ijika, ukwengeza umbala, has a version noma uhlobo njengoba 003/111, 004/111 — ngokuvamile ayihambisani nomunye, futhi okungenani ibe nalezi nemingcele efanayo. Uma ufake inguqulo engahambisani ukubonisa ngemuva kokucima kudivayisi Siyobonisa isithombe white ngokuphelele, noma nemithende. Ngakho-ke, uma uhlela ukwenza esikhundleni kwesikrini akuyona enkonzweni yethu sesevisi ngaphambi uthenga ukuthola ukuthi yini version ukubonisa efakwe BlackBerry yakho .
Original umhlangano LCD screen touch-screen for BlackBerry 9380 Ijika, Black, isikrini uhlobo 004/111 9380LCD-OIA-004/111 (LCD-39575-004/111) ●
Original umhlangano LCD screen touch-screen for BlackBerry 9380 Ijika, Black, isikrini uhlobo 003/111 9380LCD-OIA-003/111 (LCD-39575-003/111) ●
Black, isikrini uhlobo 004/111 9380LCD-OIA-004/111 (LCD-39575-004/111)
Black, isikrini uhlobo 003/111 9380LCD-OIA-003/111 (LCD-39575-003/111)